Maxaa la arkaa - Wararka Safarka | Wararka Safarka (Bogga 3)
5 waxyaabood oo lagu sameeyo Rio de Janeiro
Rio waa caasimada dalxiis ee koonfurta marka hadaad qorsheyneyso inaad tagto ha moogaan 5-ta shay: buuraha, xeebaha, favelas, kubada cagta iyo dabcan, Masiixa.
Maxaa la sameeyaa saddex maalmood Shanghai
Shanghai waa magaalo dad badan leh laakiin ha ka nixin, waa inaad dalbataa booqashada. Sidaa darteed, tilmaan waxa la samaynayo 3 maalmood Shanghai si aan loo seegin waxa ugu fiican.
5-ta meelood ee ugu wanaagsan ee keli lagu safri karo deyrtaan
Waa run in safarka ku wehelinta asxaabta ama qoyska ay tahay khibrad aad u xiiso badan oo ay ka buuxdo ...
5 ayaa qorsheynaya inuu ku raaxeysto xagaaga Madrid
Ogosto ayaa timid oo dadka reer Madrid waxay ku talaabsadeen xawaaraha inay ka baxaan magaalada weyn ee gadaal. Majiro xeeb iyo waqti fog ...
Hong Kong escalators, waa safar aad u xiiso badan
Ma waxaad aadeysaa Hong Kong? Qabow! Ha u seegin kor u qaadayaasheeda, tan ugu dheer adduunka: waxay kor iyo hoos u kacaan oo u soo maraan dukaamo, baarar iyo maqaaxiyo.
Meelaha loo booqdo deyrtan
Soo hel fikrado dhowr ah oo ku saabsan xulashada meelaha safarka lagu tagayo dayrtaan, laga bilaabo jardiinooyinka dabiiciga, xeebta ama magaalooyinka Yurub.
Haddii aad aadeyso Romania ha sii joogin Bucharest, u dalxiis dalxiis! Waxaa jira goobo fantastik ah oo aad ugu dhow qasriga Dracula, daaraha waaweyn, keymaha iyo magaalooyinka.
Sababaha lagu doorto meel baadiya ah oo lagu nasto fasaxaaga
Soo ogow qaar ka mid ah sababaha ugu wanaagsan ee lagu doorto meel baadiyaha ah oo ah fasaxaaga xiga, meel deggan oo dabiici ah.
The Towers of Florence, calaamadaha iyo aragtiyaha
Markaad booqato Florence, ha ilaawin inaad fuusho munaaradeeda qarniyadii dhexe: iyagu waa aragtiyo dusha sare leh! Qor magacyadan oo ku raaxee.
9 magaalooyin soo jiidasho leh oo looga baxo
Soo ogow 9kan magaalo ee soo jiidashada leh oo kuyaala juqraafiga Isbaanishka, geesaha yar yar halkaasoo ay jiraan waxyaabo badan oo lagu arki karo.
20 magaalo soo jiidasho leh oo ku taal Galicia II
Ka ogow toban magaalo oo kale oo soo jiidasho leh Galicia xulashadan labaad ee meelaha yaryar ee aad ku booqan karto dhulkan quruxda badan.
Soo hel tobanka ugu sareeya 20 magaalo ee soojiidashada leh ee Galicia. Meelo badan oo lagu bixiyo geesaha yaryar.
Aberdeen, luul ku taal Scotland
Aberdeen waa meel weyn oo loo tago Scotland: kaniisadaha, xeebta, qalcadaha, meelaha lagu qurxiyo wiishka, William Wallace. Maxaa kale oo aad rabtaa?!
11 waxyaabaha muhiimka ah ee loogu raaxeysto Granada
Soo ogow 11 waxyaalood oo muhiim u ah inaad ku raaxeysato Granada, fikradaha dhammaan dhadhanka magaalada Granada iyo hareeraheeda.
5 waayo-aragnimooyin waaweyn oo lagu noolaado safarka Faransiiska
Markii aan ka hadleyno Faransiiska waxaan tixraaceynaa mid ka mid ah dalalka ugu booqashada badan adduunka ee muuqaalkeeda quruxda badan, ...
5 meelood oo lagu booqdo Lima
Lima waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan uguna dhameystiran ee la booqdo: taariikhda gumeysiga, farshaxannimadii ka hor Columbian iyo taariikh, jardiinooyin, daaraha waaweyn iyo waxyaabo kaloo badan.
WorldPride Madrid 2017, tilmaamaha rasmiga ah ee xisbiyada Kibirka
Laga bilaabo 23-ka ilaa 2-da Luulyo, Madrid waxay leedahay waxyaabo badan oo lagu xuso. Hal-ku-dhigga ah “Jacaylka cidda aad jeceshahay, Madrid ayaa ...
Maalmaha xagaaga ee Bratislava
Ma xiisaynaysaa Bratislava? Ma waxay u egtahay qarsoodi iyo qarniyadii dhexe? Marka, booqo maxaa yeelay ma niyad jabi doontid: qalcado, kaniisado, harooyin iyo carwooyin qarniyadii dhexe.
Soo helida 'Shan matxaf, waddo kale oo Madrid' ah
Paseo del Prado ee magaalada Madrid waxaad ka heli doontaa waxa caan ku ah 'saddexagalka farshaxanka' ama ...
Sigüenza wuxuu ku guuleystey cinwaanka Dalxiiska Dalxiiska Reer Miyiga ee 2017
Sigüenza waxay dhowaan ku guuleysatay cinwaanka astaanta ah ee Dalxiiska Dalxiiska Reer Miyiga ee 2017 oo ay siisay bogga ...
Masaajidka Cathedral-ka ee Córdoba goobta ugu fiican ee xiisaha dalxiiska ee Yurub 2017
Isbaanishku waa mid ka mid ah waddamada soo jiita dalxiisayaasha ugu badan sanad walba iyada oo ay ugu wacan tahay isku dhafkeeda wanaagsan ee caloosha, dhaqanka, ...
Dooxada Jerte waa casaan casaan si loogu dabbaaldego Cerecera 2017
Daawashada ubaxyada cherry guga waa wax cajiib ah. Dalka Japan dhacdadan waxaa loo yaqaan Sakura ...
Geesaha gaarka ah ee Galician Rías Baixas
Waxaan ogaan doonnaa qaar ka mid ah geesaha gaarka ah ee Galician Rías Baixas, oo leh biyo-dhacyo, jasiirado iyo qalcado la booqdo.
5 madxaf oo xiiso leh oo lagu booqdo carruurta iyo talooyin ku saabsan sida loo sameeyo
18-kii Maajo, Maalinta Madxafka Caalamiga ah ayaa la xusay, taariikh ku habboon in la xusuusto in ...
5 meelaha dahsoon ee Paris
Paris waa magaalo qadiim ah waxayna leedahay geeso badan oo dahsoon. Qaar waa la yaqaan qaarna sidaa uma badna. Matxafka Vampirism, daaradda xabaalaha?
Waxyaabaha lagu arko Fuerteventura
Soo ogow waxyaabo badan oo aad ku arki kartid kuna samayn kartid jasiiradda Fuerteventura, laga bilaabo xeebta illaa muuqaalka dabiiciga ah iyo magaalooyinka raaxada leh.
4 kaniisado qurux badan oo yar oo laga yaqaan Paris
Ma booqataa paris oo ma jeceshahay kaniisadaha? Markaa ha iloobin inaad booqato afartan kaniisadood iyo kaniisadaha: wax yar baa la yaqaan laakiin soo jiidasho leh.
7 meelood oo kaladuwan oo loo maro Buundada May
Ista ka dib, buundada May ayaa timaadda, qaar badan oo ka mid ahna waxay hordhac u yihiin ciidaha xagaaga oo in badan la sugayay. Kuwaas…
U safri Ibiza oo ka socda Madrid wax ka badan 4 euro
Waxaan ka helnay heshiiskan weyn: U safarka Ibiza oo ka socda Madrid kaliya wax ka badan 4 euro at eDreams. Ka faa'iideyso fursaddan!
Titlis, buundada ugu dheer uguna cajiibsan ganaaxyada Yurub
Switzerland waxay leedahay meelo qurux badan iyo Buundada Hakinta ee Titlis lama aamini karo. Waa buundada ugu weyn ee Yurub laga joojiyo waxaana ku wareegsan buuro!
Mojácar, meel qurux badan oo ku taal Almería
Miyaad hore u qorshaysay xagaaga 2017? Raac qorraxda oo madaxa u soco Almería: tuulada quruxda badan ee Mojácar iyo xeebteeda quruxda badan ayaa kugu sugeysa halkaas.
Basilica-ka Atocha iyo Pantheon-ka ragga nugul ee Madrid
Meel u dhow Plaza de Carlos V ee Madrid, oo caan ku ah magaceeda Atocha, waxaa ku yaal Basilica-ka Marwadayada ...
U safri Japan si aad uga qaybgasho hanami guga
Xilliga gu'ga maalmuhu way sii dheereeyaan, heer kulka ayaa ka macaan waana ku raaxeysan karnaa dabeecadda wax kasta ...
Geirangerfjord, fjord qurux badan oo lagu duubay The Wave
Mid ka badan ayaa loo isticmaalaa filimada musiibada ee dadka Mareykanku badanaa sameeyaan. Haddii aysan ahayn super ...
Dalxiiska Tabernas Desert ama Isbaanish Far West
Lama degaanka Tabernas ee ku yaal Almería waa mid ka mid ah dabeecadaha dabiiciga ah ee ka yaabiya socdaalka booqanaya ...
Meelaha ugu waaweyn iyo booqashooyinka Victoria, Australia
Baro meelaha ugu waaweyn iyo booqashooyinka gobolka Victoria ee koonfur-bari Australia, oo ah gobol ay ka buuxaan xeebo iyo beero canab ah.
5 meelood oo aad u khaas ah oo loo safro 2017
Wax aad u yar ayaa ka haray ciidaha Easter-ka iyo xagaaga soo socda markaa waa waqtigii ...
5ta meelood ee ugu fiican ee korka ka arki kara New York
Habka ugu wanaagsan ee lagu qaddarin karo quruxda New York waa xagga sare, marka ujeeddadan shanta ah ee dhibcaha ah si aad u qaadatid sawirrada ugu fiican.
Kawagoe, Little Edo oo u dhow Tokyo
Haddii aad joogtid Tokyo oo aad ka aragtay mid aad u casri ah oo caalami ah, u safri Kawagoe, Little Edo, aad u dhow, oo soo hel Japan xilligii dhexe.
Dalxiis loogu tagayo Mount Takao, oo ah meel dusha sare ah oo ku taal Tokyo
Ma joogtaa Tokyo oo aad dooneysaa inaad aragto dabeecadda? U aad dhanka Mount Takao, oo saacad kaliya u jirta: wadiiqada jidadka, kursiga fadhiga, kaymaha, geedaha cherry, daanyeero iyo aragtiyada ugu fiican
Booqashada godadka cajiibka ah ee adduunka
Maqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay godadka cajiibka ah ee aan ka heli karno adduunka. Waxaan kaliya dooranay 6 kamid ah, ma rabtaa inaad waxbadan aragto?
Socodka agagaarka Malasaña, xaafadda hipster ee Madrid
Kacaankii dhaqan iyo bulsho ee Madrid soo maray intii u dhaxeysay 70s iyo 80s ee qarnigii XNUMXaad ...
5 Matxafyada lagu booqdo Jarmalka
Maqaalka maanta waxaan ku soo qaadaneynaa 5 matxaf oo lagu booqdo Jarmalka. Haddii aad qorsheyneyso inaad u safarto waddanka Jarmalka, dhowaan, hubso inaad booqato.
Dalxiiska banaanka ee Luxembourg
Ma taqaan Luxembourg? Waa waddan yar laakiin waxay leedahay wax kasta oo lagu raaxeysto dalxiiska bannaanka: waddooyinka loo maro baaskiilleyda iyo dadka lugaynaya, dooxooyinka iyo qalcadaha.
Waqooyiga Alaska, xadka adduunka
Haddii aad jeceshahay Dabeecadda oo leh xaraf weyn markaa ma tabi kartid Alaska. Woqooyi waa meesha ugu fog uguna rogan gobolka waana qurux badan tahay.
Meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago ee Mongolia
Haddii aad jeceshahay dabeecadda oo aad ku lumiso meelo fogfog iyo meelo qalaad, waxaa la joogaa waqtigii aad ogaan lahayd quruxda dabiiciga iyo dhaqanka ee Mongolia.
Mongolia, dalxiis qalaad
Mongolia waa meel dalxiis oo qurux badan isla markaana qurux badan. Haddii aad rabto inaad ku noolaato tacabir, dalalkan lamadegaanka, buuraha iyo jaranjarooyinka ayaa ku sugaya.
Qalcaddii gobolkii Andalusiya (II)
Maqaalka maanta waa sii socoshada tii hore ee qalcadaha gobolka Andalus. Markan waxaan kuu keeneynaa afar kale.
Hal qasri oo kuyaala gobolka Andalusiya (I)
Maqaalka maanta wuxuu ku habboon yahay kuwa jecel taariikhda iyo adduunka qalcadaha: Andalusia iyo qalcaddeeda, gobolkiiba hal.
Booqo Belfast iyo Dublin
Ma joogtaa Belfast? Waxaad safar ugu tagi kartaa Dublin, way dhowdahay wax badana waa in la arkaa. Qor sida loo mideeyo labada magaalo iyo waxa lagu arko mid kasta.
Booqo London iyo Edinburgh
Sidee ku saabsan booqashada London ka dibna u safraya Edinburgh? Halkan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan sida loo sameeyo iyo waxa lagu booqdo labada magaalo.
5 sanad guuradii booqashada ee Isbaanishka sanadkan 2017
Kaliya waxaa lasii daayay sanadkan 2017, waxaa la joogaa waqtigii la bilaabi lahaa ka fikirka waxa noqon doona baxsadka aan sanadkan sameyn doono Kow iyo toban baa tagay ...
Maxaa lagu arkaa Hanoi, caasimada Vietnam
Hanoi waa irridda laga galo Vietnam, markaa dhowr maalmood ku qaad si aad u aragto waxa ay bixin karto: magaaladii hore, suuqyada, macbudyo iyo pagodas.
7 ayaa qorsheynaya in sanadka cusub ee Shiinaha loogu dabaaldego magaalada Madrid
Laga bilaabo Janaayo 13 ilaa Febraayo 17, Sanadka Cusub ee Shiinaha waxaa looga dabaaldegi doonaa Madrid, sidaas darteed maya ...
Qasriga Yusupov, halkaas oo lagu dilay Rasputin
St. Petersburg waxay caan ku tahay daaraheeda waaweyn, laakiin mid kaliya ayaa lagu dilay Rasputin. Taasi waa sababta aadan u seegi karin Qasriga Yusupov.
5 soo jiidasho yar oo aan la aqoon laakiin aan la ilaawi karin ee Rome
Ma waxaad aadeysaa Rome Ha la joogin meelaha ugu caansan ee soo jiidashada leh oo baro meelo qurux badan oo aan ahayn meelaha la booqday. La kulan Rome oo aan la aqoon!
5 qorshe ayaa la samaynayaa marka kirismaska ​​ay carruurtaadu ku weydiin doonaan
Farshaxaniistaha caanka ah ee Andy Williams ayaa ku dhihi jiray mid ka mid ah heesahiisa caanka ah in Kirismaska ​​uu yahay kan ugu ...
5 Goobaha loogu talagalay Kirismaska ​​oo ka duwan
Qodobkaan waxaan ku ogaaneynaa 5 meelood oo loo dalxiis tago ciida gaalada. Haddii aadan aad u jeclayn xafladaha Kirismaska, meelahan adiga ayaa ku soo jiidan doona.
Baños, oo ah luul ku qarsoon Ecuador
Haddii aad go'aansato inaad booqato Ecuador, ha moogaanin magaalada buuraleyda ah ee Baños. Waa janno run ah dadka jecel waxqabadyada bannaanka.
Maxaa lagu arkaa Shiraz, Iran
Soo hel waxyaabaha yaabka leh ee Shiraz, oo ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn Iran. Jardiinooyin, masaajidyada, masaajiddada, bacadlaha, socodka.
Daawasho indho indheyn ah oo ka socota Iran
Iran waxay sii wadaa inay naga yaabiso waxyaabaha lala yaabo. Isfahan waa magaalo weyn, dhaqameed iyo Hidaha Dunida. Ha ka fikirin inaadan booqanin!
Safar Iiraan, meelaha dalxiis ee dalxiis
Soo ogow waxyaabaha dalxiis ee dalxiiska Iran, laga bilaabo Persepolis qadiimiga ah iyo daaraha waaweyn iyo matxafyada Tehran, caasimaddeeda.
Booqo Matxafyada Qadiimiga ah ee Istanbul
Istanbul waa magaalo taariikh, farshaxan iyo dhaqan badan leh oo meesha ugu fiican ee waxaas oo dhan lagu ogaan karo ay tahay Matxafkeeda Qadiimiga ah, oo ay ku taal dhaxalkeeda weyn.
Sida loo booqdo Aqalka Cad iyo Pentagon
Washington ma aadaysaa Markaa ha moogaanin booqashada laba goobood oo caan ah oo ku yaal Mareykanka: Casa Balnca iyo Pentagon. Waxaa jira tours bilaash ah.
Waxa laga qabanayo Lima, caasimadda Peru
Ma ogaan doontaa Machu Pichu? Marka ka faa’iideyso oo dhowr maalmood ku qaad magaalada Lima, caasimadda Peru. Waa magaalo weyn! Incas, gumeystayaasha, cunnada, farshaxanka, dhaqanka.
Madagascar, janno udgoon vanilj ah
Haddii aad jeceshahay inaad sahamiso, soo ogaato oo aad ku dhiirrigeliso, ha joojin safarka, socdaalka iyo raaxaysiga Madagascar, janno ugu dambaysa Dunida.
Jasiiradda Anglesey, oo ah jasiiradda Druids
Haddii aad jeceshahay dhaqanka Celtic markaa hubi inaad booqato Isle of Anglesey ee Waqooyiga Wales. qurux badan meel kasta oo aad ka eegto, waa meel aad u fiican oo la ogaado.
Meelaha u dhow ee lagu caweeyo bisha Nofembar
Ka dib buundada Todos los Santos, oo leh dharka Halloween ee ku kaydsan qolka, iyo kala badh ...
Afar madxaf oo ku yaal Buenos Aires
Ma booqaneysaa Buenos Aires? Hubso inaad booqato afartan goobood ee gaarka ah: Tiyaatarka Colón, Matxafka Evita, Matxafka Soogalootiga iyo Qasriga Barolo.
Fasaxa Kareebiyaanka Costa Rica
Ku soco gobolka Kariibiyaanka ah ee Costa Rica waxaadna ogaataa xeebo, keymo, biyo-dhacyo, buuro, tuulooyin iyo yaabab kale oo aan dhammaad lahayn.
5 buundooyin qaas ah oo aad u baahan tahay inaad sawir iskaa ah ka qaadatid
Buundooyinka uu qoraalkani ka hadlayo ayaa ka badan isku xidhka isku xidhka labada xeebo. Waan ogahay…
7 meelaha cajiibka ah ee Slovenia
Soo ogow 7 meelood oo cajiib ah oo aadan ku seegi karin Slovenia, oo ah waddan ay ka buuxaan meelo gaar ah oo lagu booqdo safaradaada.
Sidee loogu dabaaldegaa Maalinta Dhaxalka Hispanic ee Madrid?
Muuqaalka Duqa Magaalada Plaza ee Magaalada Madrid Bandhigga Qaranka Isbaanishka wuxuu dhici doonaa Oktoobar 12 ama, sida ...
Waxyaabaha xiisaha leh ee Paris kaa dhigi doona hadalka la'aan
Waxaan ku tusineynaa 10 xiisaha xiisaha leh ee Paris oo xaqiiqdii aadan aqoon, taas ayaana kaa dhigeysa inaad magaalada ku aragtid indho gebi ahaanba cusub.
Waxyaabaha lagu sameeyo Belfast
Ha ka daalin booqashada Belfast, waa magaalo maanta ku nool Titanic iyo Dagaalkii Carshiga. Ha moogaan!
Ciidaha Cape Verde
Miyaad ku dhiiran kartaa inaad aado Cape Verde? Raac tilmaamahan waxaadna heli doontaa waqti fiican!
Waxyaabaha lagu sameeyo Jamaica
Ma waxaad aadeysaa Jamaica? Qabow! Qor wax kasta oo aad sameyn kartid iyo inaad sameyso jannadan Kariibiyaanka ah.
Shiinaha, waddanka buundooyinka rikoodhka ah
Dhadhanka dhismayaasha waaweyn ee Shiinaha waa la ogyahay, gaar ahaan in muddo ah. Ujeeddada…
U safro lamadegaanka Tabernas ee Almería ama Isbaanish Far West
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waawayn ee Jasiiradda Iberia waa Tabernas Desert, oo ah lamadegaanka kaliya ee Yurub. Waxay ku taal ...
5 sababood oo ah inaad u safarto Indonesia oo aad ku raaxaysato
Dad badan oo safar ah, Indooniisiya waxay macnaheedu noqon kartaa waxyaabo badan laakiin waxay ka sarreysaa dhammaan tacaburka. Kala duwanaanta dabiiciga ee dalka waa mid cajiib ah: laga bilaabo cufnaanta ...
Sawirro kale oo aad jeceshahay inaad booqato haddii aad adduunka u safarto
Maqaalkii hore, waxaan kuugu soo bandhignay taalooyin caan ah oo aan ka heli karno "la ilaaliyo" haddii aan u safreyno meelo ka mid ah adduunka….
Safar ku aaddan sawirada ugu caansan uguna caansan adduunka
Haddii aad tahay mid ka mid ah safarkaas jecel inay u safraan xaqiiqda fudud ee nasashada, u jiifsashada qorraxda janno ...
Xadiiqadda Dhul-badeedka Badda ee Qaranka ee Jasiiradaha Atlantic ee ku taal Galicia
Seeraha Qaranka ee Badda-Terrestrial ee jasiiradaha Atlantikada ee Galicia wuxuu leeyahay jasiirado waaweyn oo waaweyn oo la booqdo, min Cíes ilaa Sálvora.
6 geesood oo sixir ah Galicia
Baro dhowr geesood oo sixir ah Galicia, oo ah meel sii socota oo ku koraysa dalxiiska iyada oo ay ugu wacan tahay wax kasta oo ay bixiso.
Bologna, socod ku dhex mara magaalada aqoonta
Baro waxyaabaha yaabka leh ee Bologna, magaalo leh matxafyo, qolalka, jaamacadda iyo cuntada ugu fiican Talyaaniga!
Ogaanshaha geesaha Dubrovnik, luulka Adriatic
Dubrovnik waa mid ka mid ah magaalooyinka moodada badan ee Yurub. Bilicda magaaladan ku taal xeebta Dalmatian waxay leedahay…
6 ka mid ah lamadegaanka ugu quruxda badan adduunka
Soo ogow lix ka mid ah lamadegaanka ugu quruxda badan adduunka, halkaas oo aad ku raaxeysan karto muuqaalka dabiiciga ah ee cajiibka ah iyo meelaha ballaaran.
Shibam, oo ah magaaladii qarniyadii dhexe oo dhismayaal ka jireen
Ma ogtahay in Yemen ay kajirto magaalo qadiimiya oo umuuqata mid casri ah maxaa yeelay waa dhisme saafi ah?
Waxyaabaha la arko oo laga sameeyo Jordan
Soo ogow imisa waxyaalood oo ay tahay inaad ku aragto oo aad ku samayso gudaha Jordan oo muhiim u ah, ka baxsan aragtida magaalada Petra.
7 meelood oo loogu talagalay dadka jecel taariikhda
Safarrada loogu talagalay dadka jecel taariikhda waxay leeyihiin meelo la mid ah kuwa aan ku tusno, laga bilaabo Ahraamta Masar illaa Stonehenge.
Shan dalxiis oo Dublin ah si aad ugu raaxaysato xagaaga
Intaad ku sugan tahay Dublin socod dheer ayaad sameyn kartaa, tusaale ahaan, waxaad baran kartaa tuulooyinka xeebta ku yaal ee Dublin Bay. Way qurux badan yihiin!
Shan meelood meel sare xagaaga 2016
Ma jiraan dad safra ah oo sugaya illaa daqiiqadda ugu dambeysa si ay u diyaariyaan fasaxooda xagaaga ama ay u galaan meelo yar yar, ...
Afarta jasiiradood ee cajiibka ah ee qaababka gaarka ah ee adduunka
Adduunku wuxuu hoy u yahay khasnado aan caadi ahayn, kuwaas oo qaarkood qarsoonaan lahaayeen haddii horumarka casriga ...
Safarka Paris, waxa lagu arko magaalada
Magaalada Paris waa safar ay tahay in qof kastaa sameeyo, tan darteed waxaa jira liis ay ku jiraan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah in la arko oo ay tahay inaadan ka maqnaan.
Xagaaga 2016, maxaa lagu arkaa Jarmalka
Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad barato Jarmalka xagaagan: qor meelaha ugu wanaagsan ee dalxiis loo tago! Waxaad ogaan doontaa magaalooyin qurux badan, matxafyo, qalcado iyo qasriyo!
Maxaa lagu arkaa Amman, caasimada Urdun
Amman waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu galbeedka Galbeedka Bariga Dhexe, marka ha ka waaban inaad booqato oo aad ogaato waxyaabaha ku jira.
Ma dareemaysaa inaad aadayso Qaahira? Ha ka waaban, qor tilmaamahan, boorso shandadaada oo safar, ka qoomameyn maysid!
Maxaad ku booqaneysaa Florence
Hadaad tagto Florence, ha moogaanin matxafyadeeda, daaraheeda waaweyn iyo fagaarayaasha. Waad jeclaan doontaa!
Saddex magaalo oo laga soo booqdo Prague
Haddii aad tagto Prague xagaagan, ha moogaan Pilsen, Ceské Budejovice iyo Frantiskovy Lázne. Kuwani waa saddex socod oo aan la ilaawi karin oo ka socda caasimadda Czech!
Waddo lagu ogaanayo khasnadaha violet ee Provence
Faransiisku had iyo jeer waa sanduuq wanaagsan oo layaab leh. Macno malahan inta jeer ee aan awoodnay inaan booqano wadanka dariska ah maxaa yeelay had iyo jeer ...
Meelaha xagaaga ugu wanaagsan ee Wales
Waan jeclahay muuqaalka muuqaalka Great Britain iyo sida ugu wanaagsan ee lagu baran karo waa ka bixida London, tan ugu ...
Maxay yihiin 20ka madxaf ee dunida loogu booqashada badan yahay?
Sida ku xusan warbixinta sanadlaha ah ee Shaaha / AECOM Mawduuca Index iyo Matxafka Inde, oo sanad walba falanqeeya xogta matxafka iyo ...
Todoba barood oo muhiim ah San Isidro
15-ka Maajo kasta, Madrid waxay u dabaaldegtaa dabaaldegyada San Isidro. Maxaa ku bilaabmay sidii xajka ...
7 waxyaalood oo laga sameeyo Mallorca
Soo ogow toddobo waxyaalood oo muhiim ah oo lagu sameeyo Mallorca, oo ah jasiirad leh wax ka badan oo keliya xeebo iyo qulqulo leh biyo nadiif ah.
Saddex ka mid ah barxadaha ugu yaabka badan uguna taariikhda dheer London
Haddii aad booqato London oo aad jeceshahay baararka, hubi inaad booqato seddexdan baarka Ingiriisiga ah ee ka mid ah kuwa ugu dhibka yar uguna taariikh badan magaalada.
Coachella, xafladda muusikada qof walbaa wuu ka hadlayaa
Coachella waa xafladda muusigga ee qof walba ka hadlayo qof walbana wuxuu doonayaa inuu tago. Waa loo dabaaldegaa…
Maxaa lagu arkaa jasiiradda weyn, jasiiradda ugu weyn uguna badan ee Hawaii
Haddii aad rabto inaad lugahaaga dhex gasho bacaadka madow, u lugee meelaha u dhow fulkaanaha firfircoon, ku dhex lugee kaymaha roobka, iyo inaad ku maydhato biyo-dhaca, ma seegi kartid Hawaii!
Todobo haro oo midab leh oo umuuqda meere kale
Baikal, Victoria, Titicaca, Michigan ama Tanganyika waa harooyinka laga yaabo inay caan ku yihiin ...
20 waxyaabood oo la sameeyo haddii aad timaaddo Galicia (II)
Soo ogow waxyaabo kale oo badan oo aad sameyn karto haddii aad booqato Galicia, waqooyiga Spain. Meel ay ka buuxaan dhaqamo iyo meelo u gaar ah iyo muuqaallo muuqaal ah.
20 waxyaabood oo la sameeyo haddii aad timaaddo Galicia (I)
Waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo haddii aad timaado Galicia. Soo ogow 20-kaas shay ee aan lagu waayi karin booqashadaada bulshada.
Saddex khibradood oo aadan ku seegi karin magaalada Sydney
Ma aadeysaa Sidney? Ha ku laaban adigoon ku noolaan mid ka mid ah seddexdan khibradood ee xiisaha leh buundadeeda caanka ah: fuulitaanka buundada, ku dul socodka ama ku soo duula helikobtar, midkee ayaad ugu jeceshahay?
Shan sababood oo qasab ah oo lagu ogaanayo Teruel
Saddexda gobol ee ka kooban bulshada Aragon, Teruel ayaa laga yaabaa inuu yahay kan ugu weyn ee aan la aqoon. Si kastaba ha noqotee, waa ...
Saddex ka mid ah buuraha ugu quruxda badan adduunka
Waxaa jira muuqaal qurxoon oo adduunka oo dhan ah laakiin waxaan u maleynayaa in buuraha ay ka mid yihiin kuwa ugu xamaasadda badan uguna xoog badan….
Lix meelood oo raqiis ah oo la booqdo 2016
Socdaalka meeraha, barashada dhaqamada kale, soo helida muuqaal qurxoon iyo dhadhaminta cunnooyinka ugu qalaad adduunka waa…
Kan ugufiican Ecuador: Pailón del Diablo
Pailón del Diablo waa biyo-dhaca webiga Pastaza oo ku yaal Ecuadorian Andes una dhow magaalada Baños de Agua Santa
Harooyinka Tristaina, oo muhiim u ah Andorra
Harooyinka ama circus-ka Tristaina waa koox harooyin ah oo ku yaal magaalada Andorran ee Ordino iyo qiyaastii 2300 mitir oo sare.
Afar madxaf oo bilaash ah oo ku yaal London
Haddii aadan haysan lacag aad ku keydiso, booqo matxafyada bilaashka ah ee London
Xeebta Galbeed ee Ireland, safar lama huraan ah (II)
qaybtii labaad ee safarkayga xeebta galbeed ee Ireland. Haddii maalintii iigu horreysay aan aado Cidhifyada Moher, kuwan soo socda marwalba waxaan u sii jeedaa woqooyiga
Soo ogow 5-ta Nevados ee ugu caansan Peru kuna raaxee muuqaalka cad ee ay bixiyaan buurahan waaweyn ee reer Peru.
Palmyra, oo layaableh lamadegaanka Siiriya
Palmyra waxaa loogu dhawaaqay inay tahay Goobta Dhaxalka Adduunka 1980. Waxay ku taal bartamaha lamadegaanka oo ku xigta dhul-biyoodka, waa mid ka mid ah hadhaagii qadiimiga ahaa ee ugu muhiimsanaa ee wali la hayo
Meelaha dalxiis ee ugu fiican Benidorm
Tani waa magaalo aad u qaas ah oo aad ku heli doontid fasax aan la ilaawi karin. Soo ogow kuwaas oo ah meelaha ugu wanaagsan ee dalxiis ee Benidorm.
Soojiidashada dalxiis ee ugufiican Buenos Aires
Liistada meelaha dalxiis ee ugu wanaagsan Buenos Aires
Ma waxaad u safreysaa Aasiya? Waxaan kuu ogaanay lixda lama degaan ee ugu waawayn qaarada si aad ugu raaxaysato muuqaalkooda iyo muuqaalada aan macquul ahayn. Miyaad seegaysaa?
Ma jeceshahay naqshadaha casriga ah? Waxaan ku tusineynaa qaybaha naqshadaha dhismaha ee hadda ka jira London oo aadan tabi karin haddii aad u safreyso halkaas.
Quilotoa waa volcano ka soo jeeda Ecuador oo godkeeda ay ku uruurtay waxa loo yaqaan harada godka. Mid ka mid ah harooyinka volcano ee ugu caansan adduunka.
Chernobyl, maalin ka mid ah warshadda tamarta nukliyeerka (qaybta II) - Dalxiis
Maalin maalmaha ka mid ah xarumaha tamarta nukliyeerka ee Chernobyl iyo Prypiat, oo ku yaal kaliya 2 saacadood oo baabuur ah Kiev, caasimadda Ukraine. Dalxiis nukliyeer iyo taariikhi ah.